सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रश्न पत्रमा छपाई त्रुटि भएको भन्दै परिक्षार्थीहरुको अक्रोस
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १६, २०७३ समय: १६:३८:१९
१६ पुस, इटहरी। बेलाबेला चर्चामा आईरहने सरकारी कार्यालयहरु मध्ये चर्चीत यातायात कार्यालय फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । मोरङ्ग सुन्दरदुलारी नगरपालीका स्थित साजिलाल उच्च माबीमा शनिबार भएको दुई पांग्रे लाईसेन्स लिखित परिक्षामा बितरण गरिएको प्रश्न पत्रको कारण यस पटक चर्चामा आएको हो ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै गरिदिएको छ पुनः एक पटक कोशि अञ्चल यातायात कार्यालयले । प्रश्न पत्र नबुझिने र राम्रो संग प्रिंट नभएको भन्दै परिक्षार्थीहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । प्रश्न पत्रकै कारण योग्य व्यक्तिले लाईसेन्स नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भएको सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । डागीहाट बाट लिखित परिक्षा दिन आएका अभिसेक कार्की भन्छन “प्रश्न पत्र नै बुझिने थिएन कसरी उत्तर लेख्ने ? परिक्षा हलमा सञ्चालित कर्मचारीहरुलाई यो बारे गुनासो गर्दा हामीलाई पनि कुनै जानकारी छैन भन्दै पन्छिए ! कार्की थपछन् यसै कारण लाईसेन्स पाईएन भने को जिम्मेवार हुने ?”बिहान लाईसेन्सको लिखित परिक्षा दिन साजिलाल उच्च माबि पुगेका सयौं परिक्षार्थीहरुको गुनासो यहि रहेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयले बितरण गरेको प्रश्नपत्र राम्रो संग नदेखिने अनि बुझन गाह्रो भएको भन्दै धेरै परिक्षार्थीहरु परिक्षा नदिई फर्कन बाध्य भएका छन् ।
फितलो व्यवस्थापन बिच भएको लिखित परिक्षाको गुनासो सम्बन्धि कोशि अञ्चल यातायात व्यवस्था कायालयका हाकिम श्याम भने तेस्तो समस्या नरहेको बताउछन् । प्रश्न पत्र नबुझिएको कारण भने प्रिन्टर बिग्रिएको लज्जास्पद जवाफ दिन्छन् । लामो समयको अन्तरालमा खुल्ने लाईसेन्सका लागी लिखित दिन बिहानको हुस्सुसंगै पुगेका परिक्षार्थीहरुलाई कार्यालयका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीले व्यवीिस्थत गर्न नसक्दा बिहान सात बजे हुने भनिएको परिक्षा नौं बजे सम्म पनि सञ्चाल हुन सकेको थिएन ।